I-Wiseplay, onke amajelo ehlabathi kwiselfowuni yakho [ISIFUNDO] | IPhone iindaba
Amaxesha ngamaxesha, indlela esibukela ngayo iTV kwizixhobo zethu ze-iOS iba yindinisa kwaye inganyamezeleki. Isizathu sokuqala kukuba uninzi lwamajelo luyasinyanzela ukuba sifake usetyenziso lwabo kwisixhobo sethu xa beqonda ukuba singena kwiwebhusayithi yabo kwisikhangeli esiphathwayo. Enye ingxaki kukuba izicelo zikamabonwakude ezibonelelwa kwiVenkile yeApp ye-iOS zihlwempuzeke ikakhulu. Nangona kunjalo, konke oku kunesisombululo enkosi kuWiseplay, sisicelo esinokuthi ngokulula sibe liziko lemultimedia. Kumanyathelo ambalwa uya kuba nawo onke amajelo emhlabeni kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad, kwaye siza kuchaza ukuba kanjani.
Masithathe amanyathelo okhuseleko kuqala, sifuna ukukhomba kwiindaba ze-iPhone ukuba injongo yethu kukukufundisa ukongeza uluhlu lweendlela ezivulekileyo, ezasesidlangalaleni okanye ezabucala, kodwa ukuba abawuniki umxholo wabo phantsi kokubhaliswa kwamaxesha ngamaxesha. Yintoni esifuna ukuqaqambisa ngayo? Asikukhuthazi ukusetyenziswa gwenxa kwale ndlela yokuphinda isebenze kwimultimedia. Enkosi kuWiseplay sinokubona amajelo anjengeAntena 3, TVE okanye iTele 5Nangona kunjalo, abasebenzisi abanomdla bayazazi iindlela zokujonga amajelo ahlawulelweyo okanye umxholo wee-audiovisual othintelwe lilungelo lokushicilela, sicebisa ukusetyenziswa kwesicelo ngokufanelekileyo.
1 Yintoni iWiseplay?
2 Ndiyifumana njani iWiseplay kwaye isebenza njani?
3 Ungalongeza njani uluhlu lwejelo kwiWiseplay kunye nendlela yokuzifumana
I-Wiseplay sisicelo esivumela ukuba sidlale amajelo kamabonwakude simahla, kufuneka songeze iidilesi zabo zewebhu ngenkqubo yoluhlu lwesicelo. I-Wiseplay yiprojekthi yamaqonga amaninzi, inesicelo se-iOS, seMacOS, seWindows kunye ne-AndroidYiyo loo nto uninzi lukhethe ukwenza iWiseplay iziko lemultimedia, kuba singadibanisa ubudlelwane bethu nolu hlobo lomxholo ngokusebenzisa iWiseplay kuzo zonke izixhobo zethu ngokukhawuleza nangokulula. Ukongeza, ujongano lwayo inomdla kwaye indlela yokongeza umxholo ilula ngokwenyani.
Oyena unika intsingiselo kuWiseplay yindawo yoluntu, othatha inkathazo ekwenzeni uluhlu lwamajelo, ngale ndlela sinokubona kwiWiseplay amajelo amaninzi omdla wethu kuluhlu olunye. Olu luhlu kwabelwana ngalo ngabasebenzisi kwiiforamu ezinemixholo efanayo kwaye singazongeza ngokulula nge-URL okanye ngekhowudi ye-QR, Kufuneka nje sijonge uluhlu olubandakanya umxholo onomdla kuthi, okanye uzame ukwenza uluhlu lwethu lokusetyenziselwa ubuqu.
Ndiyifumana njani iWiseplay kwaye isebenza njani?
Siyakhumbula kwakhona ukuba singaphakathi kwezomthetho, oku kuthetha ukuba i-Wiseplay ciyahambelana nemigangatho yeApple kwaye ke isimahla ukuba ifumaneke kwiVenkile yeApp ye-iOS, kwaye ke kunjalo. Kufuneka siye kwiVenkile yeApp ye-iOS ukukhuphela usetyenziso olusemthethweni, akunakuba lula. Isicelo simahla, kodwa kubandakanya intengiso, ukuzisusa ngokupheleleyo kwisicelo kufuneka sithenge u "Premium" version, into exhaphakileyo, nangona kunjalo, kumava am ndingathi ingxelo yasimahla ihanjiswa kakuhle, kukhupha kuphela iSibhengezo esincinci semizuzwana emihlanu ngaphambi kokukhutshwa kwalo naliphi na ijelo esikhethileyo.
Isicelo siyafumaneka ngeelwimi ezimbini, isiNgesi neSpanish. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, sijamelene nokusetyenziswa kwendalo iphela, oko kukuthi, kuyahambelana ne-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod Touch. Ngokumalunga nokuhambelana nezixhobo, siyigxininisa loo nto sinokusasaza umxholo wethu nge-AirPlay ngokululanjengoko isebenzisa i-native player ye-iOS. Kwelinye icala, ibandakanya neqhosha layo leChromecast ephezulu, oku kuthetha ukuba sinokwenza uninzi lwe esi sixhobo sikunike sona kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo kwisiteshi sethu seYouTube.
Ungalongeza njani uluhlu lwejelo kwiWiseplay kunye nendlela yokuzifumana
Eyona nto ilula kukuba sibhenele kwinjini yokukhangela ukuba into esiyifunayo kukukhangela uluhlu lweWiseplay. Uluhlu lwee-Wiseplay ngokubanzi ziqulathwe kwi-URL enesiphelo «.w3u«, Nangona kunjalo, sinokufumana uluhlu ngokuthe ngqo kwi-« linkI-Pastebin«, Okwenza umsebenzi ube lula kakhulu. Kuxhomekeke kuwe ukuba usebenzise uluhlu oluthobela ngokungqongqo umthetho. Ukuba ufuna okungakumbi okanye ufuna olunye uhlobo lomxholo, ndikubeka kwiinjini yokukhangela kuGoogle, ngokukhangela okulula «Uluhlu lweWiseplay»Uya kufumana iziphumo ezininzi ezonelisayo.
Ukongeza uluhlu, siza kuqala sifumane uluhlu kwimithombo yethu kwaye sikope ikhonkco loluhlu ekubhekiswa kulo kwibhodi eqhotyoshwayo. Sinqakraza kwi-bubble ebomvu esezantsi ekuqaleni kwesicelo kwaye ukhethe «Yongeza URL«, Siza kuba nejelo lethu elitsha okanye uluhlu lwesiteshi olukhoyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » I-Wiseplay, onke amajelo ehlabathi kwiselfowuni yakho [TUTORIAL]
Inomdla kakhulu, ndiza kuyizama kamva, ndiza kuphawula. Enkosi ukubulisa
Molweni ngokuhlwa nje umntu unoluhlu olusebenzayo kwi-iPhone 6 Splus enkosi
Nje ukuba isebenze ngokugqibeleleyo, uyakubona amajelo aphambili eSpanish e-TDT kunye nejelo kunye nepakeji yemidlalo bhanyabhanya, ezemidlalo kunye nothotho, ekuphela kwendlela esezantsi kuxa ndiyithumela kwiChromecast indixelela ukuba ifomathi ayisebenzi, ibuhlungu. Ukuba undishiya namagama, ndiza kuyilayisha i-url, ihlaziywa ngo-Agasti 2016
Ndingavuya kakhulu xa ungayifaka 🙂
Uluhlu lwamagama egama Lorz sitsho
Ndilinde iinyanga ezintathu ukuze iChromecast isebenze kwaye ingasondeli!
Kwi-android ndiyayiqonda ukuba ihamba kakuhle kodwa kwi-iOS yipestiño, ukufuna kwaye andikwazi.
Ukuthumela kwiChromecast kusebenza ngokugqibeleleyo kum. Kuya kufuneka usebenzise olunye uluhlu.
Ndinike umkhondo! Ndizamile ezininzi kwaye ndiye ndacinga ukuba ayinakwenzeka.
Ndicela ukubuza inqaku! Ukuba awukwazi / ufuna ukubeka ikhonkco, ndixelele ubuncinci umbhali woluhlu olusebenzisayo kwaye ndiza kulikhangela.
Uxolo ngengxelo ephindiweyo, bendingayiboni 'impendulo'
Akukho luvo, lusebenza ngokugqibeleleyo kum.
Kwaye ukuze bathunyelwe nge-airplay kwi-appletv? Xa nditshintsha ukhetho lokuyidlala kunye nenkqubo yomdlali ngaphakathi kuseto, inamandla kuphela okudlala amajelo "asimahla" kwaye ndithi "simahla" kuba sele sihlawulele wona ngokusekelwe kwintengiso, nangona kunjalo abo bahlawulwayo abadlala Ewe, zisebenza kakuhle nomdlali wesicelo, kodwa andinakho ukuzithumela kwi-appletv
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ungayenza njani?
Isebenza kakuhle kakhulu, enkosi !!
Ndikhangela inkqubo yeApple TV 4 enokuthi ilayishe kwakhona olu luhlu lwe-pastebin, kodwa andikayifumani. Ngaba ukhona umntu owaziyo ngayo nayiphi na into?
Ugqibelele, enkosi !!
Ngaba ukhona umntu owaziyo ngayo nayiphi na iApp yeApple TV 4 enokuthi iphinde ilayishe uluhlu lwe-pastebin?
Miguel, awusebenzisi i-android? Okokuqala kuba kusetyenziso lwe-iOS awunakuzisusa iintengiso kwaye okwesibini, akukho mntu ukwaziyo ukuthumela nge-chromecast nokuba, kodwa wena unako?
Naluphi na uluhlu endilubekayo luthathelwa ingqalelo ngu-perl xa ndifuna ukuvula into, AKUKWAZI UKULANDA IVIDIYO. Ndine-iphone 4s enalo lonke uhlaziyo ngaphandle kokuqhekeka kwejele. Uncedo oluthile?
Kwenzeka into efanayo nakum. Ngaphandle kwe-1, amanye amajelo akukho nto konke konke. Kwaye sele ndizama ezininzi. Kubonakala kum ukuba iyakuhlala incinci kwisixhobo.
Ndiyikhuphele i-wiseplay kwi-iPhone 6 yam kwaye ayinxibelelani ne-TV yam xa abanye besenza
Ukunyamezela kuhlaziywa kuphela ukunika iintsuku ezimbalwa kuninzi, kodwa kwiiyure ezimbalwa kuya kuba kukulungele.
Molweni umntu olungileyo unoluhlu oluhle olungasikelwanga i-iPhone 6 S kunye nombulelo kumbuliso kubo bonke
Molweni nonke, ndine-Samsung Galaxy Grand Neo plus, ndibukele amajelo kamabonakude aliqela kodwa akukho ndlela yakwazi ukubona u-1 no-2. Ngaba ukhona umntu onoluhlu lokubona i-tv1 kunye ne-tv2? Ndiyabulela kakhulu
U-Spotify uyazikhanyela izityholo zokohlwaya u-Apple Music
U-Apple akadlali ngokufanelekileyo e-Ireland, nantsi indlela ekunceda ngayo kunyango olukhethwayo